Baradho Macaan Casaan, Soosaarayaal Casaan Macaan Casaan, Soosaarayaal Casaan Macaan Casaan, Dhoofiyayaal Casaan Macaan Casaan
Baradho Macaan Casaan Casaan ah
[Ku saabsan Casaan Baradho Macaan oo Casaan ah]
Midab Baradho Macaan, midab saafi ah oo dabiici ah iyo biyo biyaha ku milma oo ay soo saarto shirkaddeena, waxaa laga soo saaray tuber xididkeedu yahay guduud baradho macaan oo casaan ah (Impomoes batatas) oo deegaanka lagu beeray Nidaamku waa hubinta, dhaqida, jarjarka, soo saarida, sifeynta, nadiifinta, xoojinta, nadiifinta （midabka baradhada midabka leh ee dareeraha ah） buufin & qalajinta (budada midabka leh ee baradhada macaan) Waxyaabaha ugu muhiimsan waa cyanidin acyl glucoside & peomidin acyl glucoside.
Budada midabka baradhada midabka macaan ee casaanka ahi waa casaan si loo cadeeyo casaanka, dareeraha waa guduud bunni ah, labaduba waxay leeyihiin urta astaan ​​u ah baradhada macaan. Waxaa lagu kala diri karaa biyaha & aalkolada, xalka propylene glycol si fudud, laakiin kuma jiraan saliida. Midabka xalka biyaha ayaa isbeddela marka PH uu ka duwan yahay. Marka PH u dhexeeyo2-6, midabku waa casaan yahay ama purplish cas. Midabka xalka ayaa noqda buluug, mana xasilloona marka PH uu ka sareeyo 6. Midabka xalka ma libdhi karo iftiinka hoostiisa muddo dheer, sidoo kale wuxuu leeyahay iska caabin fiican heerkulka sare ee aaladda aashitada.
Midabka v-alue E （1% 、 1cm PH3.0、530nm）
% Ka yar
Arsenic （sida As）
mg / kg Kayar
Lead （sida Pb）
Isugeynta Tirada Guud
cfu / g Kayar
Midabka baradhada macaan ee casaanka ah waxaa si weyn loogu isticmaali karaa khamriga, cabitaanka, suugada miraha, nacnaca, keega.
Shaabadaysan ka fogee nalka, ku kaydi meel qabow oo qalalan. Shayga dareeraha ahi waa inuu ku kaydiyaa 5 ilaa 10 ℃.
Haddii xaaladda keydinta ay gaarto sida aan kor ku soo sheegnay, budada waa labo sano laga bilaabo taariikhda wax soo saarka, dareeraha waa lix bilood. Marka la furo, waa in mar labaad la xidho oo la isticmaalo lix bilood gudahood （budada （ama hal bil （dareere ah.